အကယ္ဒမီ ‘ေဒြး’ ေျပာခဲ့တဲ့ ပုံျပင္ကို အခုထိ မေမ့ေသးတဲ့ ဦးထြန္းလြင္ - Focus Myanmar
August 13, 2019 By Myanamr Plus in အႏုပညာ Tags: ဦးထြန္းလြင္
အကယ်ဒမီ ‘ဒွေး’ ပြောခဲ့တဲ့ ပုံပြင်ကို အခုထိ မမေ့သေးတဲ့ ဦးထွန်းလွင်ပညာရှင်အစစ် တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့တာ…
အကယ်ဒမီ “ဒွေး” ပြောတဲ့ “ပညာရှင်ဆိုတာ”၊ ကျွန်တော် ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလမှာ မိုးလေဝသဌာနမှ အငြိမ်းစားယူတော့ ဂျာနယ်လစ်တွေက ကျွန်တော်ပါတဲ့ သတင်တွေ ရေးတဲ့အခါ “မိုးလေဝသပညာရှင်” လို့ သုံးလာကြပါတယ်။
ကျွန်တော် တားပါသေးတယ်။ “မိုးလေဝသသုတေသီ” ဆိုရင် တော်လောက်ပါပြီလို့။ ဒါပေမယ့် မရပါဘူးဗျာ။ အခုတော့လည်း အားလုံး က သုံးနေကြပါပြီ။၊
အဆိုးဆုံးက တော့ ကွယ်လွန် သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံကျော် ပြည်သူချစ် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ”ဒွေး” ပြောဘူးတဲ့….
“ပညာရှင်” ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကို ကျွန်တော် ပြန်ပြန်သတိရနေမိပြီး “ပညာရှင်” အ ခေါ်ခံရမှာကို အ ကြောက်ဆုံးလည်း ဖြစ်နေလို့ ပါပဲ။။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်က ထင်ပါတယ်၊ အတိအကျတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ရဲ့ အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ အကယ်ဒမီဒွေးက “ပညာရှင်”ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုပြောဖူးပါတယ်။
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး ခေတ်တုံးက သေဒဏ် အပေးခံထားရတဲ့ တရားခံ(၃)ဦးဟာ သေဒဏ် ပေးခံရမယ့်နေ့ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြရသတဲ့။
အဲဒီခေတ် အခါ ကလည်း သေဒဏ်ပေးတဲ့စံနစ်က လူပုံအလယ်မှာ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ စင်ကြီးပေါ်မှာ တရားခံတွေကိုတင်ပြီး အများ ရှေ့မှာ Guillotine လို့ ခေါ်တဲ့ ခေါင်းဖြတ်စက်ကြီးနဲ့ ခေါင်းဖြတ်သတ်တဲ့နည်းနဲ့ တရားခံတွေကို သေဒဏ် ပေးလေ့ ရှိသတဲ့။။
ဒီလိုနဲ့ သေဒဏ်ပေးဖို့ စီရင်ချက်ချခံထားရတဲ တရားခံ(၃)ဦးဟာ သေဒဏ်ပေးခံရမယ့်နေ့ကို ရောက်လာသတဲ့။ အဲဒီ နေ့မှာ လူတေ ွဟာလည်း ခေါင်းဖြတ်စက်ကြီးဆင်ထားတဲ့ ကွင်းပြင်ကြီးထဲကို မနက်ကတည်းက ရောက်လာလိုက် ကြတာ ကွင်းလုံးပြည့်ပဲတဲ့။။
အချိန်ရောက်လာတော့ တရားခံ(၃) ယောက်ကို ကွင်းလယ်မှာရှိတဲ့ ခေါင်းဖြတ်စက် စင်ကြီးပေါ်ကို တင်လိုက်သတဲ့။
ပြီးတော့ ပထမဆုံး တရားခံကို ခေါင်းဖြတ်စက်နဲ့ သေဒဏ်ပေးဖို့အတွက် ပါး ကွက်သားတွေက ခေါင်းဖြတ်စက်ရဲ့ ဓါးသွားကြီးအောက်မှာ ဆင်ထားတဲ့ ခုံအပေါ်မှာ တရားခံကို ဇက်စင်းပြီး တင်ထားစေသတဲ့။
နောက်တော့ စင်ကြီးရဲ့ အလယ်တိုင်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့ အမြင့်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ဓါးကြီးကို ဖြုတ်ချ လိုက်ကြသတဲ့။ ဖြစ်ချင်တော့ ဓါးကြီးဟာ JAM ဖြစ်နေပြီး ပြုတ်ကျမလာပဲ လမ်းတစ်ဝက်မှာပဲ ညပ်နေသတဲ့။။
ဒါနဲ့ ပထမတရားခံဟာ မသေမချင်းသတ်စေလို့ အမိန့်ချ ထားတာ မဟုတ်လေတော့ သေဒဏ်က လွတ်သွားသတဲ့။ နောက် ဒုတိယ တရားခံ အလှည့်ရောက်လာတော့လည်း ဒီလိုပဲ ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ ဓါးကြီးဟာ လမ်းမှာပဲ ညပ်နေပြန်လို့ ပထမတရားခံလိုပဲ သေဒဏ်က လွတ်သွားပြန်ရောတဲ့။။
ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး တတိယတရားခံအလှည့်ရောက်လာတော့ ဒီဖြစ်ရပ်ကို အစအဆုံး နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ တတိယတရားခံက “နေပါဦးဗျာ။
သေရမယ့် လူတစ်ဦးအနေနဲ့ မသေခင် သူလိုချင်တာလေးကို နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး အနေနဲ့ တောင်းဆိုခွင့် ရှိတယ်မဟုတ်လား ခင်ဗျာ” လို့ အာဏာပါးကွက်သားတွေကို ပြောလိုက်သတဲ့။
ဒီတော့လည်း အာဏာပါးကွက်သားတွေက တတိယတရားခံရဲ့ တောင်းဆိုချက်ဟာ တရားဥပဒေနဲ့ညီနေတာကြောင့် “အေး.. အေး ဟုတ်ပါပြီ။ မင်းက ဘာများ တောင်းဆိုချင်သလည်း” လို့ ပြန်မေးလိုက်ကြပါတယ်။။
ဒီတော့ တတိယ တရားခံက “ကျွန်တော် ဒီဓါးစက်ကြီး ဘာချို့ယွင်းနေတာလည်းဆိုတာ စစ်ဆေးကြည့်ချင်ပါတယ်” လို့ ပြောလိုက်သတဲ့။ ဒီတော့ အာဏာပါးကွက်သားတွေ ကလည်း ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ပဲ “ကြည့်လေကွာ” ဆိုပြီး ခွင့်ပြုလိုက် ကြ သတဲ့။
ဒါနဲ့ တတိယတရားခံဟာ ဓါးစက်ကြီး အပေါ်ကိုတက်ကြည့်ပြီး၊ ချို့ယွင်းနေတာကို ရှာပြီး ပြင်ပေးလိုက်သတဲ့။ နောက်တော့ ပြန်ဆင်းလာပြီး “ကဲ…ကဲ…ကောင်းသွားပါပြီ။ ခင်ဗျားတို့ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ် နိုင်ပါပြီ” လို့ပြောလိုက်သတဲ့။။
ဒီတော့လည်း အာဏာပါးကွက်သားတွေက “အေး.. ဆက်လုပ်စရာကတော့.. ဒီတစ်ခါ မင်းအလှည့် မို့ မင်းရဲ့ခေါင်းကို အဲဒီ ဓါးစက်ကြီး အောက်က ခုံပေါ်ကိုတင်လိုက်တော့” လို့ ပြောကြသတဲ့။
ဒီတော့လည်း တတိယ တရားခံဟာ ပြောတဲ့ အတိုင်း သူ့ရဲ့ခေါင်းကို ခုံပေါ်လည်း တင်ပြီးရော၊ အာဏာပါးကွက် သားတွေက ဓါးစက်ကြီးရဲ့ မောင်းကို ဖြုတ်ချလိုက်တာ။
တစ်ခါတည်း အမြင့်မှာ တပ်ထားတဲ့ ဓါးသွားကြီးဟာ ဝှီးကနဲ ကျလာပြီး တတိယတရားခံရဲ့ ခေါင်းကို ဒုံးကနဲဖြတ်ချလိုက် သတဲ့။ ဒါနဲ့ တတိယ တရားခံဟာလည်း ခေါင်းအဖြတ်ခံရပြီး သေသွားရပါသတဲ့။ ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲတဲ့။။
ပြောချင်တာကတော့ ပညာရှင်ဆိုတာ ကိုယ့်အသက်သေရမယ့် ကိစ္စဖြစ်ပါစေ၊ မှားနေတာ၊ လွဲချော်နေတာကိုတွေ့နေရရင် ကိုယ့်ပညာနဲ့ ပတ်သက် ပြီး….
ပညာရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကို အထိခိုက်မခံပဲ အသက်စွန့်ရသည်ဖြစ်စေ အမှားကို ပြုပြင်ပြီး အမှန်ကိုဖေါ်ထုတ်ကာ၊ အများအကျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ပဲ အနစ်နာခံ သယ်ပိုး ပေးစမြဲပဲ ဆိုတာပါပဲ။။ ကဲ ပညာရှင်လို့ အ ခေါ်ခံရဖို့ လွယ်လားဗျာ။။